दर्शकले रुचाएका सफल संगितकार विसी - Rajmarg Online
दर्शकले रुचाएका सफल संगितकार विसी
दाङको तुलसीपुर १५ मा जन्मिएका गितकार/संगितकार सुनिल बिसीले नेपाली गितसंगितको बजारमा छोटो समयमै आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनु भएको छ । उहाँले श्रृजना गरेका उसलाई पाउन मन्दिरमा पुग्थे, उसलाई पाउन २, रुवाउने हजार सिंन्दुरको धर्काे, आशुको तलाउ, कसलाई दोष, जहा माया त्यहाँ संका, ए माया लगाएतका आधुनिक गितहरु रहेका छन् । यसैविच हामीले गितकार÷संगितकार सुनिल विसीसँग कुराकानी गरेका छौँ …….. ।।
तपाईको संगितिक यात्रा कसरी सुरु भयो ?
जिन्दगीको भोगाईलाई गीतसंगितको माध्यमबाट समाजसामु ल्याउन सकिने भएकाले मलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रुचि लाग्यो । त्यसैले नै मैले गितकार÷संगितकारको रुपमा आफुलाई चिनाउदै लगे । अहिले एउटा सफल गितकार÷संगितकारको रुपमा चिनिनका लागी मेरो दुख र भोगाई पनि आफ्नै छ ।
संगित क्षेत्रमा लागेर तपाईले पाएको उपलब्धि के हो ?
संगित र म साथि जस्तै हो । म संगितबिना आफुलाई अधुरो ठान्छु । त्यसैले संगित क्षेत्रमा आफुलाई नै समर्पण गर्दै लागे । मैले संगित गरेका गितले मलाई आफ्नो पहिचान दियो । संसारसामु मलाई चिनायो । मेरो लागी सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै मेरो पहिचान हो । संगित क्षेत्रमै मैले मेरो पहिचान र जिवन भेटे ।
तपाईले संगित गरेका गितमध्ये तपाईलाई औधि मन परेका त्यस्ता कुन कुन गित छन् ?
मैले शब्द÷संगित गरेका प्राय सबै गित मलाई राम्रो नै लाग्छ । तर पनि त्यसभित्र पनि केही निकै मन पर्ने र सबैले रुचाउने खालका गित पनि छन् । जुन गितले मलाई एउटा अब्बल र सक्षम संगितकारका रुपमा चिनिन सफल बनाए ।
मैले शब्द लेखन र संगित गरेकामध्ये मलाई र मेरा श्रोता तथा दर्शकहरुलाई असाधै मन परेका गितहरु उसलाई पाउन मन्दिरमा पुग्थे, उसलाई पाउन २, रुवाउने हजार सिंन्दुरको धर्काे, आशुको तलाउ, कसलाई दोष, जहा माया त्यहाँ संका, ए मायालगाएतका डान्सिङ गित छन् । यही र यिनै गित संगितले मलाई आफ्नो पहिचान बनाउन सहयोग पुग्यो ।
तपाईले शब्द संगित गरेका अधिकांश गितहरु मायामा धोका पाएकाहरुलाई मलम बन्ने खालका छन्, किन यस्तो ?
मेरो आफ्नो भोगाई र म आफै पनि भावुक खालको भएका हुनाले म यस्ता गित संगितहरु धेरै गर्छु । आफ्नो मायालाई नपाएकाहरुको भावमा डुवेर उनिहरुको घाउमा मलम पट्टि बन्न सकु भन्ने सोचका साथ मैले यस्ता गितहरु धेरै गर्छु । समाजमा आफुले चाहेको प्रेमी नपाउने धेरै मानिस छन् । उनिहरुका लागी मलम बन्न खालका मेरा गित हुने हुनाले पनि मेरो गितलाई धेरैले मन पराउछन् । त्यसैले मैले यस्ता गितहरुमै सफलता भेटे र यस्तै खालका गितहरु गर्र्र्दै जान थाले ।
संगित क्षेत्रमा तपाई कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म संगित क्षेत्रमा धेरै सन्तुष्ट छु । मैले गरेका कामहरुले नै मलाई सफलता दिएका हुन् । मैले गरेका गितलाई श्रोत र दर्शकहरुले रुचाउदा एक खालको सफलता मिलेको छ भने अर्काेतिर मैले आफैले चलाईरहेको सुनिल विसी नामको युटुव च्यानलमा अहिले २ लाख सब्क्राईबर्स पुगेको छ । त्यो पनि मेरो एउटा महत्वपुर्ण सफलता हो । मलाई यही काम अनि श्रोता र दर्शकको मायाले धेरै नै सन्तुष्टि दिएको छ ।
तपाईको अव के खालका गितहरु नेपाली सांगितिक बजारमा आउदै छन्, तयारी के छ ?
मैले सुरुवादी चरणमा आधुनिकमा भावुक गित नै गरेको होईन् । मैले अन्य गितहरु गर्दा त्यत्ति राम्रो सफलता भेटेको महसुश भएन । जव मैले आधुनिकमा स्याड गितहरुमा शब्द÷संगित गर्न थाले त्यसपछि मेरो सफलताको यात्रा सुरु भएको मान्छु । त्यसपछाडी मैले आधुनिकमा स्याड गित गर्न थाले र बाकी जिवन पनि यसैगरी यस्तै गितसंगित यस्तै गितहरु गर्ने योजना छ । जसको लागी मलाई अझै पनि धेरै दर्शक र श्रोतहरुको मायाको खाचो छ ।
एउटा सफल गितकार÷संगितकार हुनका लागी के चाहिदो रैछ ?
मेरो विचारमा गितको लागी सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा शब्द हो । गितको शब्द श्रृजना गरिरहदा आम नागरिकको भोगाई र उनिहरुको जिवनशैलीलाई समेटेको हुनुपर्छ । अर्काेतिर यस्ता गितहरु गरिरहदा सबैले सुन्न सक्ने खालका शब्दहरु राख्नुपर्छ ।
अहिले केही छाडा गितहरु पनि सांगितिक बजारमा छन् । त्यस्ता गितहरुले छिनभरको सफलता पाएपनि समाजलाई ति गितहरु पच्दैनन् । त्यसैले हामीले गितको शब्द गरिरहदा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ भने आम नागरिकको मन छुने खालका गितहरु हामीले लेख्नुपर्छ ।
त्यसपछि त्यसलाई सफल बनाउनको लागी त्यही खालको उत्कृष्ट संगित गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि त्यो गितलाई सही न्याय दिनका लागी शब्दको भावमा डुवेर संगितको तालमा त्यो गितलाई गाउन पर्छ । त्यपछिको सफलताको मज्जा छुट्टै हुन्छ ।
यो समय र संवादका लागी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
मलाई मेरो संगित क्षेत्रको अनुभव मेरा दर्शक र शुभचिन्तकहरु सामु सुनाउने अवसर दिनुभयो । यसको लागी राजमार्ग अनलाईन परिवारलाई पनि धेरै धरै धन्यवाद ।
Posted in र्वार्ता, विचार, सिनेमा
Prevआज विश्व खाद्य दिवस : विश्वका ८२ करोड मानिस खाद्य अभावको चपेटामा
Nextरुकुम पश्चिममा स्थानीय युवा र प्रहरीबीच झडप, सात जना प्रहरी घाइते